Mhando dzesideburns dzevarume | Stylish Men
Alicia tomero | 12/06/2022 10:40 | Akaveurwa, Kuchengetwa kwega, fashoni, Hairstyles, Trends
Isu tinorarama munguva yerusununguko rwakakwana rwekugara pane chero bvudzi. Chii chiri chokwadi ndechekuti fashoni mumagadzirirwo ebvudzi haana kusiiwa parutivi uye isu tinotarisa pane izvi vanofanira kufarira sei sideburns. Mhando dzesideburns dzevarume dzichanyanya kuenderana dzakashanduka sei munhoroondo uye kunyanya kukura kwemunhu.
Sideburns Munhoroondo yose vakapa ruzivo rwakawanda pamusoro pemunhu ndiani akanga akapfeka. Nenzira iyi yaizoenda mukutariswa kwebvudzi uye kugadzira rumwe rudzi rwekusiyana kwevanhu uye kunyange zvoupfumi kana njere.
Sideburns haina kukanganwa, ndizvo chikamu chakakosha mukugerwa kwemurume. Nhasi kune akawanda uye akawanda anofarira umo kupera kwepini kunofanirwa kuenderana nechimiro chakati. Nekudaro, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti iyi nzvimbo yemuviri Icho chidimbu chakakosha chebvudzi rebvudzi, neiyi nzira ichafarirwa zvikuru nekucheka kwako.
1 Chii chinonzi sideburns?
2 Sideburns nehupamhi
3 nokuda kwechimiro chayo
4 Nekureba kwemasideburns
Chii chinonzi sideburns?
Sideburns inzvimbo yebvudzi iyo iri pamativi emusoro uye ubatanidze pamusoro wemusoro nendebvu. Kureba kwayo uye kuwanda zvinoenderana nekupera kwemugadziri webvudzi kana nyanzvi uye kupi kuchave kupedzisa kwekupedzisira kunozopihwa kune iyo yebvudzi kuti udzore mufananidzo chaiwo wechiso ichocho.
Izvi sideburns dzakafara kana kuti dzakafara zvikuru, dzakanyanya kushamisira uye painogadzira nzvimbo huru pamativi echiso. Kunyanya imhando yepini yakagadzirwa nokuda kwavarume vane ushingi uye naizvozvo dzinofanira kugara dzakatakurwa zvakarongwa uye zvakanatswa.
Unogona kuva nazvo hupamhi hwepanyama, zvichipiwa kuti kuchengetedza kwayo hakuve kwakanyanya kunyanyisa, saka pakupedzisira gadzira kutarisa kwakapfava, asi yakagadziriswa. Kuveura bvudzi kune kuwanda kwakawanda uye kunowanzo kuperekedzwa nemhando iyi ye sideburns.
Imwe mhando yetemberi yakafara ndiyo inotaridzika chinhu chakanaka uye kazhinji kupa chitarisiko zvakawanda zvechisikigo uye stylized. Kugadziriswa kwayo kunowanzoda kuzvipira kwakawanda kuitira kuti magadzirirwo ayo arambe akasimba.
nokuda kwechimiro chayo
Peak pin. Ine chimiro chayo yakanongedzera pasi. Chimiro chayo chakanyanya uye muzviitiko zvakawanda chinova chinoshamisira uye chinokatyamadza. Inzwa zvakanaka kwazvo nzira yako muvanhu nezviso zvakafara uye ipai rocker style kune ani nani anoipfeka.
Rectangular. Ndiyo yakanakisa uye yatinowanzo jaira kuona. Kuchekwa kwayo kwakakona uye inouya yakasvibiswa yakananga kundebvu. Ndiyo nzira yekupfeka nayo.
Yakareba uye yakanaka. Kune varume vane a chiso chakareba icheka zvakakwana. Chimiro chayo chinotetepa sezvainobatana nendebvu, asi isingapereri panhongonya.
Yakaumbwa neL Iri fomu rakanyanya uye rinoonekwa zvakanyanya kune vane mukurumbira vanozvipira kuzvipa kongiri uye hunhu hwakanyanya. Tine muenzaniso muna Elvis Presley. Pasina kupokana, chimiro chayo chakasarudzika chakapihwa L-chimiro, uye kupera kwayo kuchabatana nendebvu uye kuchaita kuti ndebvu pachayo ibatsire kuumba chimiro ichi.
temberi dzakaputika. Iwo matemberi akakura zvakanyanya uye anoshandiswa mune zvakanyanyisa zviitiko. Anowanzo shandiswa pazviitiko zvakakosha, sezvo paine vashoma vanoshinga. Chimiro chayo chine a hunhu hwemudhorobha uye dzinoshamisa zvikuru.
Pamwero welobe. Iyo ndiyo yakasarudzika mhando yesideburn, kune avo vanhu vasingade kumira kunze mumufananidzo wavo uye kuchengetedza zvakajairika zviso zvechiso. Neichi fomu chimwe chinhu chakarurama uye chinoyevedza chinotakurwa.
Mupfupi kwazvo. Nerudzi urwu rwemasideburns, hazvifanirwe kuve nehanya zvakanyanya nekuzvichengeta zviri mumamiriro akanaka kwazvo. Kuchengetedza kwayo kuri nyore uye Vanogadzirisa kune chero rudzi rwebvudzi. Muzviso zvakatenderedzwa ivo vanobata kumeso zvakanyanya sezvo ichitarisira chimiro chemufananidzo unoratidzwa.
Panzeve. Iwo mapini anosangana paurefu hwepakati. Ivo vanopa kutarisirwa kwakanaka uye zvakare vanowanzo kirasi, sezvo vachitaridzika zvakanaka pazviso zvakawanda.
Mapini akashaikwa kana akadzoserwa kumashure. Chimiro chepini chinenge chisipo. Inoveurwa kusvika padanho rakafanana nebvudzi, asi chete mumamiriro ezvinhu apo bvudzi rakaveurwa zvachose nenzira yeUnder Cut, asi neiyo buzz cut style, mupfupi pakureba. Iyo sideburn inotangira kuzasi kwainosangana nendebvu yakaveurwa, uye inopera ichienda kumusoro uye nekungwara kunyangarika.
Kusarudza rudzi rwepini ndizvo ichasarudza chimiro chedu nehunhu. Kana iwe uine chiso chinotsigira akasiyana-siyana akachekwa mamodheru, zviri nani kuti uedze nemamwe ayo atotsanangurwa. Zvakawandisa bvudzi rakagerwa kunge maronda epadivi ichava seti yezvese maitiro izvo zvinosanganisa maitiro ekucheka aunoda. Kutarisira zvakanyanya ndebvu uye sideburns kune zvidzidzo zvinokurudzira zvigadzirwa zvakanakisa zvekuchengeta kwako.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Stylish Varume » Kuchengetwa kwega » Mhando dzekusvira varume
Vakadzi vanoda varume vakagerwa here?